Qaybaha spiro Cuntooyinka Cicmo biochemical biochemical
Products > Xerooyinka Spiro
Maxay yihiin Fasiro?
Maaddada Spiro (oo sidoo kale loo yaqaano spirane) waa unug jidheed oo kiimiko ah oo leh qaab dhismeed oo ka badan hal sidbaan. Halkan, siddooyinku waxay isku xirxiraan hal atom oo caan u ah dadka oo dhan. Xaqiiqdii, magaca "spiro" ayaa laga soo qaatay ereyga latka, taas oo macnaheedu yahay dabayl ama barkad.
Nooca aasaasiga ah ee xeryaha spiro waa baaskiil, oo leh qaab dhismeed laba-laab ah. (Biyuhu waa laba). Ama, waxay lahaan kartaa qaybta baaskiilada taas oo noqon doonta qayb yar oo ka mid ah habka wicitaanka ee weyn. Qodob kasta ha ahaadee, dhammaan siddooyinku waxay ku xiran yihiin hal atom oo keliya oo qeexaya dhamaantood.
Spirane marmarka qaarkood waxay noqon kartaa mid buuxda carbocyclic ama heterocyclic. Carbocyclic waxaa loola jeedaa xeryaha oo dhan waa kaarboonka, halka heterosyclic macnaheedu yahay in xeryahooda ay leeyihiin mid ama ka badan atom aan kaarboon ahayn.
Xaaladaha Spiral waxay sidoo kale leeyihiin liis daroogo kala duwan oo iyaga hoos yimaada. Daawooyinka ayaa hoos ku qoran -
Noocyada kala duwan ee qaabka Spiro
Marka loo eego qaabkooda giraangirta, dheecaanka waxaa loo qaybiyaa qaybo kale oo kala duwan.
2. Spiro Compound -Hetero-heteroge
Xeryaha spiro waxaa loo isticmaalaa adduunka oo idil. Qaar ka mid ah xeryahanadan waxaa loo adeegsanayaa sida xeryaha qalabka loogu talagalay waxbarashada dimoqraadiyada. Xeryahaas waxaa loo isticmaalaa qaab-dhismeed loogu talagalay gargaarka daaweynta, adigoo u adeegaya sida iskoolka.
Daraasado faahfaahsan ee Daroogooyinka hoos ku taxan ee Spiro
Tirada ka qaybgalka daroogada waa DB00490. Buspirone waxaa ku jira fasalka dhererka ah ee azaspirodecanedione, waa aaladda xanuunka serotonin agonist iyo wakiilka anxiolytic. Sidoo kale, daroogadu waxay leedahay waxtarka oo la barbardhigi karo diazepam.
Daawada waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta niyadjabka iyo xanuunka welwelka.
Tirada ka qaybgalka daroogada waa DB04842. Nooca unugyada yaryar, daawadani waa wakiilka antipsychotic kaas oo muddo dheer soconaya waxaana la isku duri karaa. Fluspirilene waxaa loo adeegsadaa daaweynta xanuunka dhimirka ee schizophrenia.
Tirada ka qaybgalka daroogada waa DB00693. Marka lagu daro isticmaalka mukhaadaraadka iyo qurxinta muusikada ujeedooyinka dibedda, daroogadaan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii gargaar loogu talagalay dhaawacyada maskaxda iyo dhaawacyada loogu talagalay ulajeeddooyin aan sabab lahayn. Waa calaamadda huruudka caleenta cagaaran-cagaaran marka dharka la jeexjeexo. Laakiin, waxay u muuqan kartaa cagaar dhalaalaya calaamado alkaline-ku salaysan sida jilicsanaanta aqueous.
Tirada ku-biiritaanka ee daroogadan waa DB13911. Phloxine B ama Phloxine waa midabka midabka. Waxaa loo isticmaalaa midabka midabada kiniiniga (ilkaha), iyo waliba waxyaabo aan caqli gal ahayn si ay uga caawiso inay midabyo u noqoto midabka. Kiiskii hore, kiniinnadu waxay bukaan socodka ka caawiyaan inay si firfircoon uga fikiraan aagagga loo baahan yahay qashin dheeraad ah.
Tirada ka qaybgalka daroogada waa DB12030. Waa meco yaryar oo badiyaa loo isticmaalo tijaabooyin loogu talagalay goobaha waxbarasho ee kala duwan. Cilmi-baarista Cagaarshowga, Viral, Human, Non-Acne Steatohepatitis, Cirrhosis Hepatic, Pharmacokinetics iyo Cudurrada Xanuunada Khatarta ah ee Cudurka Beer beerta.
Muuji dhammaan 6 natiijooyinka